Tsindrian’ny Media Sosialy ny Filohan’i Trinidad sy Tobago · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2016 6:21 GMT
Tranon'ny filoham-pirenena, Trinidad sy Tobago. Efa simba ny trano fonenana. Sary avy amin'i Albert Sydney [CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons]
Taorian'ny Facebook Live video notontosainy voalohany ary niteraka fanontaniana lehibe momba ny fampiasàn'ny Biraon'ny Filoham-pirenen'i Trinidad sy Tobago ny volam-bahoaka, namoaka lahatsary iray hafa indray i Rhoda Bharath, mpaneho hevitra ara-politika sady mpikaroka eny amin'ny oniversite.
Tamin'ny lahatsariny tamin'ny 1O ktobra 2016, ny teboka voalohany tamin'ny raharaha nataon'i Bharath dia ny nangatahany tamin'ny Filoha Antony Carmona hamaliany ny fiampangana azy ho mpanao kiantranoantrano izay nolazain'ny tati-baovao Trinidad Guardian tamin'ny 9 Oktobra. Araka ny tatitry ny Guardian, “nahazo vola fanampiana mitentina TT$ 300.000 mahery [44.800 dolara Amerikana] i Savitri Singh, izay mitondra anarana mitovy amin'ny rafozam-bavin'ny Filoha Carmona, Savitri Seeteram Singh, mba hiaraka amin'ny fianakaviana Carmona mandritra ny fitsidihana marobe any ampitan-dranomasina. “
Araka ny voalazan'ny Lalàna mifehy ny Fiainana ara-panjakana ao Trinidad sy Tobago – sy ny fitsipika parlemantera mikasika ny fandraisana mpiasa – dia miteraka fifandirana ara-tombontsoa ny fandraisana havana hiasa. Nampahatsiahy ny mpijery mikasika ireo ohatra maro i Bharath fa nanararaotra ity fitsipika ity avokoa ireo miasa ao amin'ny biraom-panjakana ary tsy nisy voasazy, saingy nanamarika izy fa tsy midika izao fanao ratsy taloha izao fa tokony avela hitohy ny fomba fanao.
Nanome tsiny ny filoha avy eo i Bharath noho ny fanambarany am-pahibemaso tamin'ny 28 Septambra 2016, izay namaly ireo fanontaniana napetrany tamin'ny lahatsary teo aloha mikasika ny fandraisany vola fanampiana isam-bolana hanaovana trano fonenana TT$ 28.000 (4.182 dolara Amerikana) kanefa mbola monina ao amin'ny trano vatsian'ny fanjakana ara-bola. Tamin'ny fanambarana nataony, nanizingizina i Carmona fa tsy “nanery, nanoro hevitra, nanome alalana na nitaky izany fanapahan-kevitra” izany, saingy “nampahafanarin'ny” “SRC [Vaomiera Mpanara-maso ny Karama] tsy miankina iray … fa mahazo vola fanampiana aho mandritra ny fotoana hipetrahako amin'ny trano fonenana vonjimaika tahaka itony. “
Nanohitra izany fanambarana izany i Bharath, manondro ny tatitra an-gazetin'ny Trinidad Express tamin'ny 8 Novambra 2014 nilaza fa “ny mpitan-tsoratry ny Filoha no nangataka tamin'ny Lehibe Mpitantana ny Mpiasa (CPO) mba hanome ‘fanazavana’ momba ny fandoavana vola fanampiana amin'ny trano fonenana ho an'ny Filoha Anthony Carmona izay mahabe adihevitra ankehitriny.” Noheverina fa nomena vola saram-pialofana afa-ketra $ 28.000 ny filoha noho ity fanazavana ity.
“Ity no tena hevi-dehibe,” hoy i Bharath: “Tsy manana fahefana hanome saram-pialofana ho an'ny filoham-pirenena ny Lehibe Mpitantana ny Mpiasa. Ny hany sampana manana fahefana hanome “vola fanampiana amin'ny trano sy ny trano fonenana ho an'ny filoha dia ny Kabinetra. [.. .] ary tsy nitranga izany.”
Mametraka ahiahy, hoy i Bharath, raha mavitrika amin'ny fanaovan-javatra tahaka izany ny mpiasam-panjakana manana toerana lehibe ka manaraka ireo dingana ilaina momba ny fampiasana volam-bahoaka.
Noho ny fitomboan'ny ahiahy amin'ny fahadiovam-piasan'ny Biraon'ny ny Filoha – izay nahazo vazivazy ratsy tanteraka ny sasany – mitaky ny fametraham-pialàn'i Carmona ny olom-pirenena sasany. Nanamarika tamin'ny lahatsoratra Facebook ilay mpampanoa lalàna Justin Phelps hoe:
Ny lalàna rehetra iainantsika sy hihazonantsika ny fiarahamonina mandroso, ny lalàna sy ny filaminana dia navoaka teo ampelatanan'ny filoha. Tsy maintsy mitoetra ivelan'ny ahiahinay azo inoana hatrany ity birao ity. Ialao ny mitoetra amin'ny tian'i Trump horombahina ary mijoroa.
Tamin'ny lahatsariny, nampiditra tranga vaovao azo avy amin'ny loharano tsy fantatra anarana ihany koa i Bharath: fa tamin'ny Mey 2016, raha niady hevitra momba ny Volavolan-dalàna momba ny Sampam-pitsikilovana Stratejika (SSA) ny parlemanta ao amin'ny firenena, dia voalaza fa nanatrika fivoriana notontosain'ny mpanohitra ao amin'ny firenena ny senatera mahaleotena iray. Ny filoha no manendry ny olona hipetraka amin'ny seza tsy miankina ao amin'ny parlemanta, izay tsy tokony hitanila sy tsy miankina amin'ny antoko politika.
“Ka te-hanontany aho, Senatera Dhanayshar Mahabir ….” hoy i Bharath, “nanatrika ny fivorian'ny mpanohitra nandritra ny fandinihana ny Volavolan-dalàna momba ny SSA ve ianao, ary nisy fiantraikany tamin'ny fandatsahanao vato tao amin'ny Antenimieran-doholona ve izany avy eo, ary nisy fiantraikany taminao ve ny fivoriana mba hampitambatra ny dabilion'ny tsy miankina ary hilaza amin'ny dabilion'ny tsy miankina ny fomba atao rehefa handrotsa-bato? “
Nolaniana ihany ny volavolan-dalàna momba ny SSA tamin'ny 10 May 2016, izay nahazo ny fanohanan'ny roa tamin'ireo senatera tsy miankina sivy.